Nge-Epreli ka-2021-kwiNombolo ye-1 yeWebhusayithi yaseYurophu
Archives Monthly: April 2021
30 UTshazimpuzi 2021
ILanga Edwards Loyisa uMoruti Mthalane kunye neziphumo ezivela eLondon
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Edwards vs Mthalane, Ionut Baluta, UJordani Ellison, UJoshua Frankham, U-Kieran Smith, UMichael Conlan, Moruti Mthalane, UNaheem Ali, URyan Garner, Ilanga Edward, UTroy Williamson	0
ILanga Edwards Loyisa uMoruti Mthalane
IHolo yaseYork, eLondon
Ilanga Edward (16-0, 4 iiKO) I-PTS UD 12 Moruti Mthalane (39-3, 26 iiKO)
(Isihloko se-IBF seFatherweight)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayengu -118-111, 120-108, 115-113, bonke befuna ukuphumelela ngamanqaku angama-Edwards angama-12.
UMichael Conlan (15-0, 8 iiKO) W IPTS MD 12 Ionut Baluta (14-3, 3 iiKO)
(Isihloko se-WBO International Super Bantamweight)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayi-114-114, 115-114, 117-112 kwisigqibo seConlan esona sigqibo.
UTroy Williamson (16-0-1, 12 zeeKO) W TKO 6 U-Kieran Smith (16-1, 7 iiKO)
(Isihloko sokugqibela seBritish Super Welterweight Title)
Amanqaku okulwa: UWillionon ukothulwe kumjikelo we-6 emva kokulwa ngokufanelekileyo. Ilungelo liqale phantsi. Ixesha lokumiswa yayingu-1: 28 kumjikelo wesi-6.
URyan Garner (10-0, 6 iiKO) I-PTS 6 UJordani Ellison (I-11-33-2, 1 KO)
Amanqaku okulwa: I-Garner yayinqumle kakubi kwijwabu leso lasekhohlo. Inqaku lalingama-60-54 kumanqaku eGarner ophumelele ngaphezulu kwemijikelo emi-6.
UJoshua Frankham (3-0, 3 iiKO) I-PTS 4 UNaheem Ali (I-2-67-1, 1 KO)
Amanqaku okulwa: Amanqaku ayengu-40-36 amanqaku e-Frankham aphumelele u-4 kwimijikelo.
UPaul Cummings 155.75 nxamnye ULevi Frankham 158.25
UDale Arrowsmith 159.75 nxamnye UJonathan Kumuteo 158.3
UStephen Jackson 119.75 nxamnye UAndrew Kaine 121.75
Amanqaku omnyhadala: Ukunyuswa kweQueensberry kukhuthaza, i-ESPN + (iUSA), iBT Sport 1 (UK) yeTV / yosasazo.
Bhalisa kwi-new yethu Isiteshi se-YouTube ukuqala kungekudala ngeendaba zamanqindi kunye neziphumo zamva nje, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje kwikhonkco lomfanekiso apha ngezantsi:
UMichael Conlan woyisa u-Ionut Baluta eLondon
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	IConlan vs. Baluta, Ionut Baluta, UMichael Conlan	0
UMichael Conlan woyisa u-Ionut Baluta
UMichael Conlan uphumelele itayitile ye-WBO ye-super-bantamweight ngelixa esandisa irekhodi lakhe elingaphumelelanga ngokuphumelela Ionut Baluta KwiHolo yaseYork ngolwe-Sihlanu.
La madoda mabini ayesilwa kumdlalo weQueensberry Promotions bukhoma kwi-BT Sport, apho yayiyimfazwe yokuqala kaConlan ukusukela oko wehla kwi-super-bantamweight.
Kwakungumlo wokhuphiswano, kodwa umgangatho weConlan (15-0, 8 KOs) wawubonakalisiwe ngokuchasene neBaluta (14-3, 3 KOs) kumaxesha aphambili, kubonakala ngathi kulunge ngakumbi isenzo.
Abagwebi babenokusondela kunoko bekulindelwe emva kwemijikelo eli-12 elwelwe nzima, benamanqaku ali-117-112, 115-114, 114-114 ukunika uConlan uninzi lwezigqibo.
Uloyiso lubona uConlan esondela kwelinye inyathelo kwiWBO super-bantamweight isihloko, kwaye wonwabile ngakumbi ukulwela eso sihloko ngokulandelayo.
UConlan wathi: “UBaluta unzima kunokuba bendicinga. Ubonakalisiwe kwimilo yakhe emibini yokugqibela ukuba ungumdlalo njengoko esiza, kodwa ebelahlekile ngeetoni zeepunch. Kwakungumlo olungileyo nangona kunjalo kunye nokulungiselela kakuhle okuzayo.
“Wayephethe i-injini yakhe ngaphezu kokuba bendicinga kwaye usebenze kumjikelo wonke. Yayingumlo wam wokuqala kwi-super-bantamweight kunye nomjikelo wam wokuqala we-12 kunye novavanyo olufanelekileyo apho ndikhoyo.
Ndifuna uStephen Fulton eBelfast ngo-Agasti. Kunye nezopolitiko zomdlalo wamanqindi, ngaba iyakwenzeka loo nto emva koko? Andazi, kodwa siyathemba njalo. Ukuba kunokwenzeka ngo-Agasti ndingayithanda loo nto, kodwa ukuba akunjalo ebusika eNew York.
“Ndizakuhlala ndikhuthele kwaye ndizokulwa ngo-Agasti nokuba kwenzeka ntoni, ngoku kubuyela ngqo ejimini. Ndiyazi ukuba kufuneka ndinyamezele kwaye ndingangxami ngokukhawuleza, ngoko ke ukuba kufuneka ndilinde de kube nguDisemba iwonga lehlabathi ke ayongxaki.
UTroy Williamson uyeke u-Kieran Smith kwi-Britane Final Eliminator
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	U-Kieran Smith, UTroy Williamson, UWillionon ngokuchasene noSmith	0
UTroy Williamson woyisa uKieran Smith
UTroy Williamson waba ngumceli mngeni onyanzelekileyo kwitayitile ye-super-welterweight yaseBritane njengoko wayeyekile U-Kieran Smith Ngexesha lomlo wabo ngolwe-Sihlanu.
Amadoda amabini aya entloko e-York Hall eLondon bahlala kwi-BT Sport, ngomlo okhonza njengomphelisi wokugqibela we-Britane super-welterweight isihloko.
Kwakungumlo osondeleyo wokukhuphisana phakathi kukaWillionon (16-0-1, 12 KOs) kunye noSmith (16-1, 7 KOs), kodwa yayiyindoda yaseDarlington eyathi yaphumelela xa yafumana uthotho lweenqindi kumjikelo wesithandathu.
USmith wayezinikele konke konke de kube lelo xesha kwaye ngokuqinisekileyo uza kubuya, kodwa akazange akwazi ukubuyela kwimeko yesiqhelo, kunye noWillionon ukufumana uloyiso lokumisa okumangalisayo.
U-Williamson wathi: “Ibingumlo olungileyo, osondeleyo. Ndiziqeqeshe ngokuzimisela kwimijikelo eyi-12 elungileyo njengoko bendisazi ukuba ungumfana onjani uKieran. Wayeyitalente ekhethekileyo kwaye ingxelo enkulu yenziwa ndim ngobu busuku.
“Bendicinga ukuba ndimonzakalisile kwangethuba, kodwa umqeqeshi wam undixelele ukuba ngumlo ojikeleze i-12 ungangxami kwaye ukhethe nje i-shots, yile nto ndiyenzileyo.
“Yayisisiphelo esigqibeleleyo, ke ngoku ndifuna isihloko seBritane. Ndibonisile ukuba ndinako ukuyixuba kunye nabani na kwaye ndinokubetha nabani na ngemini yabo. Ndikulo mdlalo wokulwa, kwaye ndiwulungele ngoku. ”
I-Chisora ​​ngokuchasene neParker, Taylor kunye noJonas yokuLwa kweeNtsimbi ezivela eNgilane
IBoxen247.com Ukulwa ubunzima	UCampbell Hatton, UChris Eubank Jr., UCraig Richards, Dereck Chisora, NguDmitry Bivol, UGregory Trenel, UJames Tennyson, UJoseph Parker, UJovanni Straffon, Katie Taylor, LEVI DUNN, UMarcus Morrison, UNatasha Jonas, UScott fitzgerald	0
Dereck Chisora ​​vs.Joseph Parker
IAO Arena, eManchester, eNgilani
I-12 x 3 yemizuzu engenanto ye-WBO ye-Intercontinental Heavyweight Title
DEREK CHISORA 17st 12lbs 8oz v UJOSEPH PARKER 17st 3lbs 2oz
(UFinchley, eNgilani) (eAuckland, eNew Zealand)
Imizuzu eli-10 x 2 engabalulekanga yeWBO
UKATIE TAYLOR 9st 8lbs 8oz v NATASHA JONAS 9st 8lbs 7oz
I-4 x 3 yemizuzu Kukhuphiswano olulula
ICAMPBELL HATTON 9st 9lbs 9oz v LEVI DUNN 9st 8lbs 5oz
(EManchester, eNgilani) (Prestwich, eNgilani)
I-10 x 3 yemizuzu kukhuphiswano lobunzima obuphakathi
UCHRIS EUBANK JR 11st 7lbs 9oz v MARCUS MORRISON 11st 7lbs 8oz
(IBrighton, eNgilani) (Hattersley, eNgilane)
I-12 x 3 imizuzu ye-WBA yokuKhanyisa ubunzima kwiHlabathi liphela
I-DMITRY BIVOL 12st 6lbs 2oz v CRAIG RICHARDS 12st 6lbs 6oz
(ISt.Petersburg, iRussia) (ICrystal Palace, eNgilane)
I-4 x 3 imizuzu yokhuphiswano lobunzima
UJOHNNY FISHER 17st 7lbs 4oz v uPHIL WILLIAMS 19st 2lbs 7oz
(Romford, eNgilani) (Swindon, England)
I-12 x 3 imiz engenamxholo I-World Lightweight Isihloko seHlabathi
UJAMES TENNYSON 9st 8lbs 7oz v JOVANNI STRAFFON 9st 7lbs 2oz
(IBelfast, Northern Ireland) (ISixeko saseMexico, eMexico)
I-8 x 3 imizuzu yokhuphiswano lwe-Super-Middleweight
I-SCOTT FITZGERALD 12st 1lbs 4oz v IGREGORY TRENEL 11st 12lbs 2oz
(Preston, eNgilani) (Dainville, France)
UZulina Muñoz ubuyela ngokuchasene no-Isis Vargas ngoMeyi we-15
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UIsis Vargas, UMunoz vs.Vargas, UZulina Muñoz	0
UZulina Muñoz vs Isis Vargas 15/5/21
Ngomhla we-15 kaMeyi, owayesakuba yintshatsheli UZulina Muñoz ubuyela eringini ubuso ngobuso UIsis Vargas eArena San Juan, ePantitán kwisiXeko saseMexico.
Uloyiso luza kunika amandla okuqhubela phambili kwitumente yehlabathi kulo nyaka ngokuchasene noYulihan Luna kunye noYamileth Mercado.
“Ndikhuthazekile ngoba ndizakuvela kwakhona, iyakuba ngumlo onzima kakhulu kodwa ndiyavuya ukukwazi ukulwa kwakhona. Senza umzamo omkhulu, nanjengoko ndifuna ukuba yintshatsheli yehlabathi kwakhona, ”utshilo uZulina.
Umlo ungabonwa bukhoma ngexabiso elifikelelekayo kwi: https://fb.me/e/2xQEARiHY
Ukusweleka kweRash Al-Swaisat-uPhando oluZimeleyo luya kwenzeka
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	Ugqibezele iAl-Swaisat	0
Ukulandela ukusweleka okulusizi kukaRashe Al-Swaisat waseJordani ngexesha le-AIBA yoNtshatsheli yeHlabathi yoLutsha, i-AIBA ibhengeze ubuchwephesha obuzimeleyo bokuphanda kunye nokujonga iimeko zokuthatha kwakhe inxaxheba kwiMidlalo yoKhuphiswano, ukulimala kwakhe, unyango kunye nemigaqo elandelwayo kwelo thuba. .
Ngelixa uphononongo lwangaphakathi oluqhutywa ngolwazi olukhoyo ngoku ligqibe kwelokuba iinkqubo ze-AIBA zilandelwe ngokufanelekileyo, uphando olubanzi ngobuchwephesha obuzimeleyo luya kuqwalasela zonke izinto ezikhoyo, kubandakanya nezo zikarhulumente. Imiqathango eneenkcukacha nobungcali iya kubhengezwa kungekudala.
Ukusweleka kumdlalo wamanqindi kunqabile kakhulu kwaye i-AIBA izimisele ukuqinisekisa ukuba imeko yale ntlekele icacisiwe ngokupheleleyo kwaye icacisiwe kwaye nasiphi na isifundo ziyafundwa, ukuze kugcinwe ukuzibophelela ngokupheleleyo kwimpilo yeembethi manqindi. I-AIBA izakuqhubeka nokwenza konke okusemandleni ukuxhasa usapho lukaRash, abahlobo kunye nabalingane bakhe ngeli xesha linzima kakhulu.
Ngale mini: UDennis Andries woyiswa nguJB Williamson weSihloko seHlabathi
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	UAndries vs. Williamson, UDennis Andries, JB Williamson	0
UDennis Andries vs JB Williamson
Epreli 30th, 1986
UGuyana owazalwa elwa i-Bhritane, u-Dennis Andries waphumelela ubuntshatsheli be-WBC lightweight, emva kokoyisa i-American, u-JB Williamson, ngu-UD. Umlo wenzeka e-Edmonton, eNgilani. Indoda yesithathu kwiringi yayinguAngelo Poletti. Abagwebi yayinguTony Castellano, uHarry Gibbs noJean Deswerts.
U-Andries uqhubeke nokukhusela isihloko kumlo wakhe olandelayo, woyisa ngempumelelo u-Tony Sibson kamva kwakuloo nyaka ngaphambi kokuphulukana kumlo wakhe olandelayo ngalo lonke ixesha u-Thomas Hearns ngo-Matshi 1987.
UKatie Taylor kunye noNatasha Jonas uBunzima-Phambi kwangomso
IBoxen247.com Ukulwa ubunzima, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	Katie Taylor, UNatasha Jonas, UTaylor noJonas	0
UTasha Jonas kwaye Katie Taylor bobabini baphumelele ukwenza ubunzima ngaphambi komlo wabo omkhulu ongenakuphikiswa wokulwa ubunzima kule mpelaveki.
Ngomso ngoMgqibelo, ngoMeyi 1, eManchester Arena e-United Kingdom, intshatsheli engenakuphikiswa, uKatie Taylor (17-0, 6 KOs), ukhusela izihloko zakhe uNatasha Jonas (9-1-1, 7 KOs) apho kulindeleke ukuba ibe ngumlo omkhulu e-AO Arena eManchester ngoMgqibelo, bahlala e-UK nase-Ireland kwi-Sky Sports Box Office, nakwihlabathi liphela kwi-DAZN.
Abafazi babini bathathe inxaxheba kubunzima-ngolwesiHlanu, uJonas efaka isikali kwi-134lbs 7oz, ngelixa uTaylor ebesinda kancinci kwi-134lbs 8oz.
UJonas ujonge ukwakha kwintsebenzo ebalaseleyo ayivelisileyo kumlo wakhe wokugqibela, apho uninzi lwababukeli babona kufanelekile ukuba anikwe isigqibo kumlo wakhe wenqaku lomhlaba noTerri Harper.
Umlo nxamnye noTaylor ubona i-duo ivuselela ubutshaba babo kwiminyaka elishumi eyadlulayo, xa babenomlo wabo omkhulu kwi-Olimpiki yaseLondon ngo-2012.
UTaylor usandula ukoyisa uMiriam Gutiérrez kumlo wakhe wamva nje, ngo-Novemba. UNatasha wasondela kakhulu ekuphumeleleni intshinga yakhe yokuqala kwihlabathi liphela ngehlobo, xa wayetsala intshatsheli yeWBC super featherweight uTerri Harper.
UMolina ulumkisa u-Eggington ngaphambi komhla we-22 kaMeyi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UCarlos Molina, Eggington vs Molina, Imidlalo yeHennessy, USam Eggington	0
Sam Eggington vs Carlos Molina 22/5/21
Owayesakuba yintshatsheli yeHlabathi 'UKumkani' uCarlos Molina Uchithe isilumkiso kwimbangi yakhe USam Eggington Kuya kufuneka ukuba abe ngoyena mntu ungcono okanye uya kukhutshelwa ngaphandle ligorha laseMexico kwimpikiswano yabo ye-WBC ye-Silver Middleweight Championship ngoMgqibelo wama-22 Meyi eCoventry Skydome Arena, bahlala ngokukhululekileyo e-UK Isiteshi 5.
Umntwana oneminyaka engama-37 wasePatzcuaro, uMichoacán de Ocampo, uthi uyakuba ngoyena mntu ubalaseleyo kwiminyaka engama-20 yobomi bakhe eyambona elawula njenge-IBF World Champion ngo-2013. Ukujongana nabadlali abaphambili kunye neentshatsheli ezijikeleze ubunzima, kubandakanya uJulio Cesar Chavez, Omnci (kabini), Mike Alvarado, Erislandy Lara, Kermit Cintron, James Kirkland, Lord Smith, Cory Spinks kunye noCornelius Bundrage.
Ukanti uMolina omtsha nolambileyo, obekwe kwindawo yesi- # kwiHlabathi liphela yi-WBC, uthi okona kulungileyo kuseza kuvela kuye okuya kuthi kwazise umlobi waseBirmingham.
Kudliwanondlebe nejennessy Sports 'yejelo leYouTube, uMolina uthe, "Ingathi ndiyangena. Ndiziva ndilungile emzimbeni, ndiyakwazi ukusebenza, ndiyakwazi ukubaleka. Ndivakalelwa kukuba ndinobuhlakani ngoku ukuya kuqeqesho lwam kwaye oko kuye kwandinceda kakhulu ngamava am kwaye ndiziva ngathi yile nto ndiyisebenzisa ngakumbi. Ndivakalelwa kukuba abakayiboni eyona nto ibalaseleyo uCarlos Molina, lo mlo uzakuba ngumlo ogqibeleleyo wokuba ndibonise uKumkani uCarlos Molina obalaseleyo owakhe walwa. ”
UMolina uzigcine exakekile kwaye uyasebenza kwindandatho nangona ubhubhane weCoronavirus ngokumisela eyakhe intengiso uKing Carlos Promotions oye wambona eqongeni nakwisihloko kwimiboniso yakhe. Okwangoku kumlo ophumeleleyo umlo osibhozo, uMolina uphumelele isiqingatha ngokunqunyanyiswa ukuze abe sisilumkiso kuEggington ukuba usazisa ingozi eringini.
Uqhubeke wathi, “Ndifuna ukuyenzela inkampani yam yokwazisa, ikwalithuba elihle lokubonisa inkampani yam eNgilane kumlo omkhulu. Isizathu sokuba ndiqalise le nkampani yokwazisa yayikukusebenza kwam ukufumana isihloko sehlabathi kwaye yeyona njongo yam. Ndiziva ngathi ndifuna ukubalasela, ndifuna ukubalasela kumdlalo wamanqindi kwaye ndifuna ukubalasela ekukhuthazeni, ndifuna ukubalasela kuyo yonke into endiyenzayo. Nantso ke indlela endiza ngayo kulo mlo, ndiyeza ndikwimo entle. Bendixakekile, bendizilolonga ngalo lonke ixesha, ndiyakuthanda ukuqeqesha, ndiyakuthanda ukubetha, ndiyakuthanda ukubaleka, ndihlala ndikwimo ephezulu. Ndijonge phambili kulo mlo kuba yena (uSam) uhlala eza enesimo kwaye ndiziva ngathi ngumdlalo ophezulu. Andicingi kule nto njengomlo nje, kodwa njengomkhuthazi nayo. Umdlalo omnandi kwaye ulungile kangangokuba bendifuna ukufumana olona luvo lubalaseleyo eringini. ”
Ukwazi ukuba ukuphumelela u-Eggington kunye nokubeka isithsaba se-WBC sesilivere kungambeka kumgama ophumeleleyo kwitayitile yeHlabathi, uMolina akakhohlisi kwaye uyaqonda ukuba kuya kufuneka oyise u-Eggington kwaye ashiye i-England nebhanti.
Wongeze wathi, “Ndigxile kwaye kufuneka ndiwuphumelele lo mlo, ayikho enye indlela. Uza kubona uKumkani uCarlos Molina olungileyo owakhe walwa, ke ndikulungele, ”
“Ndiyayithanda into yokuba ezithembile, ndifuna ukuba umdlali welinye iqela azithembe ngoba xa bengenakukubetha abanakho ukwenza le nto bafuna ukuyenza, kulapho ke balahlekelwa kuko konke ukuzithemba. Ndiziva ngathi ndiza kuwuphumelela lo mlo nokuba kunjani. Kufuneka ndiwuphumelele lo mlo nokuba ndithathe izigqibo ezilishumi elinambini okanye ndayeka emva kwexesha. ”
Umnyhadala ophambili kwiKhadi leHennessy eliphethe amanyathelo ekhadi elibonisa umkhosi weBirmingham USam Eggington (I-29-7-0, i-17 KO's) ngokuchasene nezipikili ezinzima zeMexico UCarlos Molina (I-37-11-2, i-12 KO's) ye-WBC engenanto ye-Silver Middleweight Championship. Inkxaso eyintloko ibonakalisa ukubambana phakathi kweBirmingham's UKaisee Benjamin (11-1-1, 2 KO's) kunye noDumbarton's Martin Harkin (13-1-0, 5 KO's) kwi-Eliminator ye-British Welterweight Championship.
Kwikhadi leCoventry sensation Umlambo iWilson-Bent (I-8-0-0, i-4 KO's) yenza ukhuseleko lokuqala lwegama lakhe leMidlands Area Middleweight ngokuchasene noDerby's George Farrell (5-0-0, 1 KO). Owayesakuba liQela laseBritani lokuKhanyisa ubunzima I-Shakan Pitters (I-14-1-0, i-4 KO's) inomdla wayo wokuqala ngokuchasene neBradford UJermaine Springer (I-7-2-0, 1 KO) Kumjikelo wesibhozo okoko waphulukana nesihloko sakhe kuCraig Richards kuDisemba ophelileyo. Idolophu yaseMonaghan yedynamo engasindi kakhulu UStephen 'uHitman' McKenna (I-7-0-0, i-7 KO's) kwi-rounder emithandathu, kodwa ithemba elineminyaka engama-24 ubudala elibomvu nelingaswelekanga alidingeki ukuba lihambe umgama kodwa konke ukulwa kwalo kuphele ngaphakathi. IBirmingham ibhombu yobunzima obuphakathi Idris 'IVirgo yoQhekeza uMzimba.' (9-0-1, 1 KO) iya ngaphezulu kwemijikelo emithandathu. I-Sevenoaks yonke inyathelo le-super-welterweight UMichael Hennessy Jr. (5-1-1) ikumjikelo wesithandathu ngokuchasene noWarminster kaPaul Cummings. I-Irish super-welterweight ace ace UBrett McGinty (1-0) ulandela umdlalo wakhe wokuqala ophelileyo ngoDisemba ophelileyo xa wayebonakala kumjikelo wesine ngokuchasene noJosh Hodgins waseBirmingham. Italente yobunzima beBrighton UTommy Welch (1-0-0, 1 KO), unyana walowo wayesakuba ngumceli mngeni kwi-Bhritane, i-Commonwealth kunye ne-World Heavyweight umceli-mngeni uScott, uzokulandela ukuqhuma kwakhe ngo-Disemba ophelileyo xa wayeka uMat Gordon kumjikelo wesibini kunye neempawu kukhuphiswano lwemijikelo emine .
Umlambo uWilson-Bent ubuyela ngokuchasene neGeorge Farrell ngoMeyi wama-22
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGeorge Farrell, Umlambo iWilson-Bent, UWilson-Bent vs. Farrell	0
Umlambo uWilson-Bent vs.George Farrell 22/5/21
Ukuqiniswa kweDynamite Umlambo iWilson-Bent (I-8-0-0, i-4 KO's) ikhangela enye i-KO iphumelele ekuzikhuseleni okokuqala kwesihloko sayo seMidlands Area Middleweight ngoMgqibelo we-22 ngoMeyi eCoventry Skydome Arena, bahlala ngokukhululekileyo e-UK. Isiteshi 5.
Ithemba elibomvu elingatshitshiyo elivela kwiimpawu ze-Exhall kwisixeko sasekhaya okokuqala njengentshatsheli xa ethatha umceli mngeni ongoyiswanga UGeorge Farrell (5-0-1, 1 KO) ukusuka eDerby.
U-Bent uphele kunyaka ophelileyo ngo-Troy Coleman owayengumnqantsa wesithathu kwisandla sasekunene esasichukumisa imbangi yakhe kwenye yeempawu ze-KO zonyaka zokuphumelela isihloko.
Umntwana oneminyaka engama-27 ubudala uye wafuna ukuhamba ukusukela ngoko kwaye akakwazi kulinda ukunyuka ngeentambo kwinyanga ezayo njengoko eqhubeka nomngcelele wakhe wokuya kwiimbasa eziphezulu kwisahlulo sekhaya esili-160.
Uye wathi, "Kubonakala ngathi kwakudala ukusukela oko waphumelela u-Coleman ngo-Disemba kwaye andinakulinda ndibuyele emdlalweni nge-22 kaMeyi,"
Oko kunkqonkqoza bekukuhle ngenene, yeyona nto ibalaseleyo endiye ndanayo kwimbali yam ukuza kuthi ga ngoku. Ndiyazi ukuba ndinamandla okubetha nokwenzakalisa abachasi kwaye ndibenze bahlale phantsi, kodwa andithembi nje emandleni am, ndinobuchule bamanqindi obomeleleyo kwaye ndingaya kwimijikelo elishumi okanye elishumi elinambini ngesantya esomeleleyo. Ndiyazi ukuba injini yam ikho kwaye ndiza kukulungela ukuya kuloo mgama ukuba uza kufika nini, ”
“UFarrell ujongeka emhle, akabethwanga kwaye uwathanda amathuba akhe ngokuchasene nam ke uthatha umlo. Ndizakuba ndimlungele kwaye ndiza kuphendula nantoni na ayizisayo. Ndiyazi ukuba uyathanda ukuza ngaphambili kwaye uza kuhamba nento enkulu kum. ”
UBent, onomdla, obetha nzima, isitayile sitsala abalandeli abalandela eCoventry, ekholelwa ekubeni angaqala ukuvuselelwa komdlalo wamanqindi kwisixeko esasidumile sokulwa esivelise iintshatsheli kubandakanya uDean Pithie, uNeil Simpson, uRichard Evatt, uSteven Bendall kunye noAndy. Halder.
Uqhubeke wathi, “Kuliphupha ukuba ndilwa kwidolophu yasekhaya yaseCoventry njengentshatsheli okokuqala kwaye ndifuna ukubalasela apha kwixesha elizayo kwaye ndibengumtsalane omkhulu ngezihloko ezininzi kwaye ngethemba lokuba, ngenye imini, isihloko seHlabathi , ibiya kuba liphupha elo, ”
“UCoventry uthe cwaka kutshanje kumdlalo wamanqindi, sinabadlali abaphambili kunye neentshatsheli ezivela apha ukusuka kuDean Pithie ukuya kuAndy Halder kule minyaka idlulileyo kwaye ndingathanda ukuyitshintsha kwaye ndibuyisele amanqindi emephini apha. kwaye siyenze yaba sisixeko esikhulu sokulwa kwisizukulwana esitsha sabalandeli. ”
U-Bent ubukele umlo omkhulu wobunzima obuphakathi phakathi kukaDenzel Bentley noFeliks Cash kwiitayitile zaseBritane nezaseCommonwealth ngoMgqibelo ebusuku kwaye wothuswa sisiphumo esibonise ukuba uCash utshabalalise iBentley kwimijikelo emithathu.
Wongeze wathi, “bendikhe ndahlula-hlula imijikelo engama-30 okanye engama-40 noBentley kwaye wenze into entle, ngekhe ndilindele eso siphumo. Ngesizathu esithile uBentley akazange angene emfazweni. UCash uthathe eli thuba kwaye wenza umdlalo wakhe ofanelekileyo kuye. Nje ukuba ezo glavu zincinci zibekho kumdlalo owahlukileyo, ”
Ndiyazi ukuba ndizakulwela amabhanti ase-Bhritane kunye ne-Commonwealth kwikamva elingekude kakhulu kwaye xa ixesha lifikile ndiza kubalungela. Okwangoku ndigxile kuFarrell kwaye ndiqinisekisa ukuba ndiyaphumelela. ”
UAndy Ruiz ubuya ngalo Mgqibelo ngokuchasene noChris Arreola
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Andy Ruiz, UChris Arreola, Ruíz vs. Arreola	0
UAndy Ruiz vs Chris Arreola 1/5/21
Ukubuya kwe Andy Ruiz ukuya kwisangqa yenye yeemilo ezilindelwe kakhulu kumdlalo wamanqindi kwiinyanga ezidlulileyo. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yamanani amelweyo kwicandelo lobunzima, kodwa nangenxa yenkqubo yenguqu athe wadlula kuyo. Ngoku uzakuba nethuba lokulwa igqala UChris Arreola Kumlo wamanqindi we-World Boxing Association (WBA) kulo Mgqibelo e-Dignity Health Sports Park eCarson, California.
Umlo uzakuba ngumdlalo ophuculweyo womnyhadala we-TGB kwaye uya kuba phakathi kwabachasi abanamava bobabini abajolise kwitayitile ngexesha elifutshane. URuiz waphulukana nezihloko zakhe kwisigqibo esivumelanayo ku-Anthony Joshua ngoDisemba 2019 kwaye khange alwe ukusukela oko.
Ngeli xesha utshintshe abaqeqeshi kwaye wajoyina iQela Canelo kunye noEddy Reynoso. Utshintsho olukhulu lomzimba luye lwabonwa ngothungelwano lwasentlalweni, ukongeza kwesinye isimo egameni lakhe kwaye ngoku bonke abalandeli banxanelwe ukubona utshintsho lwayo eringini.
“Ndandinobunzima obungama-310 eepawundi ukuqala kwam le nkampu. Saqala ukunciphisa umzimba ngokuthe chu kodwa ngokuthe chu. Abantu bayazibuza ukuba ndisaza kuba nawo na amandla afanayo emva kokwehla kobunzima, kodwa bendisebenza nzima ngalo mzuzu kwaye amandla ngokuqinisekileyo aza kuhlala nam, ”utshilo uRuiz kwinkomfa noonondaba kule veki.
“Ndicinga ukuba zezona zinam izandla zikhawulezayo kwisisindo esinzima. Andikho apho ndifuna ukuba khona ngoku, kodwa ndingcono kakhulu kunokuba bendikho. Ndinokungqina okuninzi ukuqala ngoMgqibelo ebusuku. Ukunqongophala kwengqeqesho ebendinayo ngaphambi koqeqesho kunye no-Eddy Reynoso ngowona mahluko mkhulu ukuya kulo mlo. Awunakudlala amanqindi, ”uqhubeke watsho.
Kwelakhe icala, u-Arreola ukwathi uziva kamnandi kulo mlo kwaye unezizathu ezininzi zokungqubana kolu ngquzulwano lwe-titanic: “Ndiziva ndihlaziyekile kulo mlo. Ndonwabile kwaye ndikulungele ukuhamba. Namhlanje yinkomfa nje yoonondaba, kodwa ukubona nje uAndy namhlanje kuyaphuma igazi lam, kuba ndikulungele ukulwa ngoku. ”
Aba babini bazakubonisa kumlo ophambili womlo wokudubula isihloko sehlabathi. URuiz unerekhodi yeempumelelo ezingama-33, ilahleko ezi-2 kunye nokubethwa okungama-22, ngelixa u-Arreola enerekhodi leempumelelo ezingama-38, ilahleko ezi-6, ukuzoba kube-1 kunye nokubethwa okungama-33.
I-Kieron Conway: Eli lithuba elikhulu
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Conway vs Cissokho, IKieron Conway, USouleymane Cissokho	0
I-Kieron Conway vs Souleymane Cissokho 8/5/21
IKieron Conway uthi ukulwa phambi kwabalandeli be-70,000 eDallas kuya kuba 'surreal' kodwa ukulungele ukuvula isimbo ngokuchasene USouleymane Cissokho kwikhadi eliphantsi le-blockbuster yobumbano phakathi kukaCanelo Alvarez kunye noBilly Joe Saunders e-AT & T Stadium ngoMgqibelo we-8 kaMeyi, bahlala kwihlabathi liphela kwi-DAZN nakwiTV Azteca eMexico.
AMATIKITI ANIKELWEYO AHLALA EKUTHENGISENI ESEATGEEK.COM
IConway (16-1-1 3 KOs) ilwa kwelona nqanaba likhulu lomsebenzi wakhe phantsi kweminyaka emibini okoko indoda yaseNorthampton yankqonkqozwa phambi kwesihlwele esincinci kwidolophu yakhe ngaphezulu kwemijikelo emine. Ukusukela ngobo busuku, umdala oneminyaka eyi-24 uye kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo; Imfazwe noTed Cheeseman yesihloko seBritane Super-Welterweight eLondon ngoJuni 2019 ephela kumzobo wokwahlulahlula kodwa kunye nentengiso kunye noEddie Hearn kunye neMatchroom.
'Iklasi enkulu kakhulu' iphumelele imilo emine ukusukela kuloo ndawo yokugcina izilwanyana kunye 'neTshizi enkulu', iphumelele i-Nav Mansouri kwi-Matchroom Fight Camp e-Essex, e-UK ngo-Agasti kunye nokuvalwa kwe-Macaulay Magowan eLondon ngoDisemba bemi ngaphandle ukubaleka.
UMagowan ungenelele endaweni yeCissokho (12-0 8 KOs) kwi-undercard ka-Anthony Joshua-Kubrat Pulev emva kwezizathu zolawulo ezinyanzele umFrentshi ukuba aphume kwibhili yomphathi wakhe uJoshua, kodwa ukungonwabi kweConway kuthathelwe indawo yimincili ngoku ukuba ufumana ukukhusela isihloko se-WBA Intercontinental Super-Welterweight kwiqonga elikhulu kunokwenzeka.
"Lithuba elihle kum, ukuphuma kwikhadi le-AJ okokugqibela ukuphuma, ibilinqanaba elikhulu kwaye ngoku oku kuvele," utshilo uConway. “Ndiziva ngathi ndingu-surreal kodwa ndijonge phambili kwaye liqonga elikhulu kunye nomlo olungileyo.
"Ndize ngendlela enzima kwimiboniso encinci yeholo apho ngamanye amaxesha ungade uhlawulwe, ukuze ndibekho kule ndawo ndikuyo ngoku kwaye kuyaphambana kwaye kufuneka ndiqhubeke nokuphumelela, ndiqhubeke ndizonwabisa kwaye ndiqhubeka ndisenza ukuze abantu bahlale befuna ukundijonga. .
“Ndathi ndakudlala amanqindi e-Deco Theatre eNorthampton phambi kwabantu abayi-1,000 70,000 abangahlawulwayo, ndaxelela abantu ukuba ndizakube ndikumdlalo wamanqindi kwelona xesha likhulu kwaye kwisithuba seminyaka emibini, ndinguye. Amakhadi e-AJ, ikhadi likaCanelo phambi kwama-XNUMX eMelika-ayonyani.
“Andinakulinda ukuba ndibekhona kunye nesihlwele esikhulu kangaka, siphendula kumanqindi akho kunye nokuvuya, kuyenza ingaziva ngathi iyiseshoni yokulwa. Ibuyile kwizinto ezinkulu, eli lelona nqanaba likhulu endakhe ndahamba kulo, ndinendawo entle kulo mdlalo ukuze kuzakubakho isihlwele esikhulu ebaleni, ngenxa yoko andinakulinda. ”
IConway kunye neCissokho bayangqubana kubusuku obukhulu kwiLone Star State, ngenxa yomanyano phakathi kweAlvarez neSaunders.
Kukho isenzo senqaku lehlabathi kwikhadi njengoko uHearn umlawuli waseMexico wamva nje ongezelelweyo kuluhlu, u-Elwin Soto (18-1 12 KOs) esilwa phantsi kwesibhengezo seMatchroom okokuqala, ekhusela isihloko sakhe se-WBO World Light-Flyweight ngokuchasene noKatsunari Takayama ( 32-8 ii-12 zeeKO).
U-Eddy Reynoso uqeqeshe uCuban Heavyweight uFrank Sanchez (17-0 13 KOs) udibana noNagy Aguilera (21-10 14 KOs), italente yaseMexico naseMelika uMarc Castro (2-0 2 KOs) walwa kwiCanelo yakhe yangaphantsi yangaphantsi, utshaba oludala lukaCastro Keyshawn UDavis (2-0 2 KOs) ujongene noJose Antonio Meza (6-4 1 KO) ngaphezulu kwemijikelo emithandathu kwaye yinto yosapho ngobusuku kunye nomntakwabo Keyshawn uKelvin Davis (1-0 1 KO) ulwa okwesibini kuhlawulwe Amanqanaba, kunye noMexico waseWelterweight ongumKristu uAlan Gomez Duran (19-2-1 17 KOs) bebhiyozela iCinco De Mayo ngempelaveki ngaphezulu kwemijikelo esibhozo ngokuchasene nomchasi oza kuthiywa kungekudala.
U-Erislandy Lara vs.Thomas LaManna wokugqibela kwiNkomfa yoNgcaciso yeNkomfa
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	U-Erislandy Lara, Lara vs Lamanna, UTomas LaManna	0
U-Erislandy Lara vs Thomas LaManna 1/5/21
Isihloko se-WBA esingenamntu esiphakathi esiphakathi ngobusuku bangoMgqibelo kwiDignity Health Sports Park eCarson, California.
“Siwulungele lo mlo wangoMgqibelo. Siza kubona ukuba uhamba kanjani lo mlo, kodwa akunamsebenzi, injongo yam kukubeka umboniso omkhulu wabalandeli.
Ndithethile ngokunyuka ukuya kwi-160-iipawundi okwethutyana. Iqela lam libuze ukuba ndikulungele na kwaye ndatsiba kweli thuba. Ndivulelekile kwimilo emikhulu kwi-154-yeepawundi, kodwa ngoku, ndiye emva kwesithsaba sobunzima obuphakathi.
“Ndize kulwa apha. Ukuba uza kunkqonkqoza, ndiza kuza ndimkhuphe kuqala. Ndonwabile ngalo mlo. Wonke umntu ukhe wazama ukundikhuphela ngaphandle, siza kubona ukuba unayo na into ayifunayo.
“Ndinamava amaninzi, kwaye angatsho nantoni na ayifunayo, kodwa ndizakulunga. Ndijonge ukumbetha kumjikelo wesine okanye kwakamsinya. ”
“Ndiyabulela ngeli thuba. Ndiqeqeshe ubomi bam bonke ngalo mzuzu omnye. Wonke amaphupha omlo wokuba yintshatsheli yehlabathi kwaye ngoMgqibelo ndiza kuwazalisekisa loo maphupha. Iya kuba yingxelo enkulu.
“Ndilwa neentshatsheli ezinyanisekileyo zehlabathi, kodwa ekupheleni kosuku, ndilambile kunaye. Ndifuna oku ngaphezulu kwayo nantoni na. Ndizilolonge kanzima kwezi veki zisithoba zokugqibela ukuqinisekisa ukuba ndikhuselekile kolo loyiso. Nokuba kungathatha ntoni, ndiza kuba yintshatsheli ngoMgqibelo.
“Ndiyathemba ukuba abalandeli bayabona ukuba ndingoweli nqanaba liphezulu. Ndingowalapha. Phumelela, ulahle okanye uzobe, ndiza kuyifumana loo mbeko.
Ndiza kunkqonkqoza u-Erislandy Lara. Yinjongo kwaye yile nto ndiza kuyifeza. Le yimpu yam, kwaye ndiyayilandela. ”
“Ndifuna ukwazisa wonke umntu ukuba ndikulungele ukwenza umboniso ngoMgqibelo ebusuku. Ndiza kuqhubeka nokufumba iimpumelelo ngalo mlo nxamnye neAvelar. Silungele umlo onqabileyo. Kodwa siya kukulungela nantoni na. Ndingacinezela kwaye ndihlasele, kodwa ukuba iimeko ziyasinyanzela, siya kuba sikulungele ukuthatha inyathelo ukubuyela umva kwaye sithathe ixesha lethu. Iya kuba ngumlo omkhulu kwaye njengakuhlala kunjalo, ndiyathemba ukuba ndiza kuphumelela. Ndikulungele ukuphumelela nokuba kufuneka ndenzeni. ”
“Ndikhuthazekile kwaye ndinomdla wokunikela konke okusemgceni ngokuhlwa ngoMgqibelo ebusuku. Ndizakushiya yonke into elapha ngokuchasene no-Eduardo Ramirez. Ndonwabile ukukhuphisana kweli khadi. Esi sisiganeko esihle kwaye lithuba elihle lokuba ndibonise into endinokuyenza kulo mlo. Ndikulungele ukubonisa wonke umntu into endinokuyenza. Abantu banokulindela ukuba lo ibe ngumlo onomdla. Sobabini sifuna eli bhanti kwaye sobabini sifuna ukuphumelela. Sizakuzinikela ngako konke esinako kwaye sinike abalandeli umboniso omnandi. ”
I-ASBC yase-Asia yamadoda kunye neyabaNtshatsheli boMkhosi wamanqindi oMama oDluliselwe eDubai
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-ASBC yase-Asia yamadoda kunye neeNtshatsheli zeManqindi yaBasetyhini	0
Kucwangciselwe ukubanjelwa eNew Delhi, India, the I-ASBC yase-Asia yamadoda kunye neeNtshatsheli zeManqindi yaBasetyhini ibuyiselwa eDubai, e-UAE. Isigqibo sithathiwe ngabaphathi be-Asia Boxing Confederation (ASBC) ngenxa yemeko yangoku yeCovid-19.
I-Asia Boxing Championship iqala nge-21 kaMeyi kwaye iya kuhlala kude kube nge-1 kaJuni. Iimbethi manqindi ezelwe phakathi ko-1980 no-2002 zikulungele ukubhalisela i-ASBC Asia Elite Boxing Championship. Olu khuphiswano luya kubanjwa kumanqanaba ali-10 abasetyhini kunye nelishumi lamadoda.
Ngenxa yokuphuhliswa kwendyikityha ye-Covid-19 e-India, i-ASBC, i-Boxing Federation yase-India kunye ne-UAE Boxing Federation bathathe isigqibo sokufudusa isixeko esasibanjelwe i-Asia Boxing Championships kwaye senzeke e-Dubai endaweni ye-New Delhi. I-UAE Boxing Federation yayineemvume ezisemthethweni ngabasemagunyeni kuRhulumente. Itonamenti iya kubanjwa ngemigaqo nemiqathango efanayo naleyo ikwiNcwadana yamaGunya eKomiti. Egameni loSapho lwe-ASBC, singathanda ukudlulisa amazwi ovelwano kunye novelwano olunzulu kubantu baseIndiya nakuRhulumente, kwaye siyathemba kumandla abo okoyisa lo bhubhane kungekudala, 'wazise uMongameli weSizwe we-ASBC uMnu. Anas Alotaiba.
UMongameli we-Boxing Federation yase-India uMnu u-Ajay Singh ubanga ukuba ukhuseleko lweembethi manqindi yeyona nto iphambili.
Ngelishwa ukuba kufuneka siyitshintshele indawo eIndiya. Besikulangazelela kakhulu ukusingatha iMidlalo yoKhuphiswano eDelhi kodwa sishiywe singenandlela. Ukhuseleko lweembethi manqindi yeyona nto iphambili kuthi kwaye yiyo le nto kufuneka sithathe isigqibo. Siyayibulela i-UAE ngokwamkela isicelo sethu kwaye yavuma ukubamba iindwendwe kwisaziso esifutshane. Siyabulela kuwo onke amaqela emanyano kunye ne-ASBC ngentsebenziswano yabo '.
'Siyibeke esweni ngokusondeleyo imeko kwaye emva kokucingisisa nge-ASBC kunye noRhulumente wase-India, sithathe isigqibo sokuyiqhuba le tumente eDubai. Ndinqwenela impilo nempilo entle yomntu wonke kwaye ndithandazela ukuba i-India iphume ngokukhawuleza kule meko, ”utshilo isigqibo uMnu. Ajay Singh.
Ushicilelo lokugqibela lwe-ASBC Asia Boxing Championships lwenzeka eBangkok, Thailand ngo-Epreli 2019. I-India, Kazakhstan, China, Uzbekistan, Mongolia, Chinese Taipei, South Korea, DPR Korea, Philippines kunye neTajikistan zabelana ngeembasa zegolide. I-China iphume phambili ekumeni kweembasa phambi kwe-Uzbekistan, i-India, i-Kazakhstan kunye ne-China Taipei.
Ushicilelo lowama-2019 lwe-ASBC Asia Boxing Championships luseke iirekhodi ezintsha kwinani labangeneleli beembethi manqindi nakwinani lamazwe athatha inxaxheba. Bebonke iimbaleki ezingama-304 kubandakanya amabhinqa ali-112 kunye namanqindi angamadoda angama-192 aye kwi-ASBC Asia Boxing Championships kwikomkhulu laseThailand.
La mazwe alandelayo angama-34 akhuphisana nohlelo lowama-2019 eBangkok: Afghanistan, Bahrain, Bhutan, Cambodia, China, Taipei yase China, DPR Korea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kazakhstan, South Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, IMalaysia, iMongolia, iNepal, iPakistan, iPhilippines, iQatar, iSingapore, iSri Lanka, iSyria, iTajikistan, iThailand, iTurkmenistan, i-United Arab Emirates, i-Uzbekistan, iVietnam ne-Yemen.
29 UTshazimpuzi 2021
UKatie Taylor kunye noNatasha Jonas bajongane phambi koMgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Katie Taylor, UNatasha Jonas, UTaylor noJonas	0
Katie Taylor vs Natasha Jonas 1/5/21
Ngo-Meyi ngobusuku eManchester Arena e-United Kingdom, intshatsheli engenakuphikiswa, Katie Taylor (17-0, 6 KOs), uya kuzikhusela izihloko zakhe ngokuchasene UNatasha Jonas (I-9-1-1, ii-7 zeeKO).
UKatie udibanise intshatsheli ephezulu, usandula ukubetha uMiriam Gutiérrez kumlo wakhe wokugqibela, ngo-Novemba.
Kwicala lakhe uNatasha, wasondela kakhulu ekuphumeleleni intshinga yakhe yokuqala kwihlabathi liphela ngehlobo xa wayetsala intshatsheli yeWBC super featherweight uTerri Harper.
Bobabini babejongane ubuso ngobuso kwinkomfa yoonondaba apho bagqabaza khona ngemiba ethile yomlo ozayo:
“Kubalulekile kum ukuvelisa umdlalo omninzi qho xa ndingena eringini yiyo loo nto ndizilolonga kakhulu kwaye kutheni ndivuka rhoqo ekuseni ndenze umsebenzi wendlela. Ndifuna ukubonisa okona kulungileyo ngalo lonke ixesha ndingena kulaa ringi.
“Ngoku, ndiziva ndihlaziyekile. Ngokucacileyo ndiyawuthanda umsebenzi wam kwaye yile nto indikhuthazayo. Ndiwuthanda kakhulu umdlalo wamanqindi.
“Ndifuna ukuqhubeka nokuphucula, kwaye kungamangalisa ukuba yintshatsheli emininzi engenakuphikiswa. Ndifuna ukubandakanyeka kwimilo emikhulu kwaye ndifuna ukuqhubeka nokudiliza le miqobo. ”
Incwadana yeHalfway Line
“Akukho nto ndizakuphulukana nayo kwaye ukuba ulwela amabhanti amane kweyona nqanaba likhulu, elona qonga likhulu kwaye awukwazi ukuziphakamisa ngengqondo emva koko kungenzeka ukuba ukwimidlalo engeyiyo. Ndiza kube ndibonisa olona hlobo lubalaseleyo ngokwam nangokwasemzimbeni ebusuku kwaye kuya kufuneka akwazi ukujongana naloo nto.
“Ndiyazi ukuba andingomdlalo wamanqindi we-aura oko kukuthi, ilifa lelo, ilivo elinguKatie Taylor, ndibetha nje amanqindi omnye umntu. Wonke umntu unobuthathaka, wonke umntu, kwaye ndiza kuzama ukusebenzisa kubo ndibeke olona nyawo lwam lubalaseleyo.
"Wonke umntu ukhankanya umlo kaPersoon, kodwa izitayile ziyalwa kwaye andinguye uPersoon, kodwa into endicinga ukuba yenziwe nguPersoon yayikukumenza (Taylor) abonakale engumntu."
UJoseph Parker: Ndifuna ukuba yintshatsheli yeHlabathi kwakhona
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	I-Chisora ​​vs. Parker, UDerek Chisora, UJoseph Parker	0
UJoseph Parker vs Derek Chisora ​​1/5/21
UJoseph Parker Ndiyathemba ukuba uphumelele UDerek Chisora eAO Arena, eManchester ngalo Mgqibelo ngoMeyi 1, bahlala kwiOfisi yeBhokisi yezeMidlalo eSky e-UK naseDAZN kuzo zonke iimarike ngaphandle kwe-UK, i-Ireland, i-China, i-New Zealand ne-Samoa, izakuqalisa indlela yayo ibuyele phezulu kwicandelo le-Heavyweight .
Owayesakuba yintshatsheli ye-WBO yeHlabathi uParker (28-2, 21 KOs) esitsha kwisigqibo esasilwelwe nzima kumjikelo we-12 malunga nexesha elide le-amateur nemesis Junior Fa eSpark Arena e-Auckland, eNew Zealand eyalungisa usukuzwano oluneminyaka eli-11 ubudala kunye naye Bantu bakuthi.
Inqanaba 3 kunye ne-WBO, uParker usandula ukudibana neChampion yeHlabathi ye-Middleweight u-Andy Lee, kwaye umntu oneminyaka engama-29 ubudala uyazi ukuba ukumiswa okumangalisayo kwe-teak-hard Chisora ​​kungamqhubela kufutshane nomnqweno wakhe wokuba Ixesha leNtshatsheli yeHlabathi.
“Ndiwulungele kakhulu lo mlo, ndinenkampu entle yoqeqesho noAndy eIreland, emva koko safudukela eMorecambe kwaye safumana istrarring enkulu phantsi kwebhanti lethu, umsebenzi omkhulu wephedi, ibhegi, yonke into,” utshilo uParker. “Ndiziva ngathi ndinalo mlo, ngokwasemzimbeni nasengqondweni, ndikwindawo entle- mhlawumbi yeyona ilungileyo bendikhe ndayihamba okwethutyana.
“Uya kubona iinguqu ezintle. Ndiya kuba bukhali, ngokuhamba ngcono kunye nokusebenza okungcono kweenyawo. Ndiza kugxila kumlo wonke. Ukuba ndenza isicwangciso somdlalo esibekwe nguAndy, kuya kuba bubusuku obulungileyo kwiqela leParker. Ndilindele ukuba uDerek abe nguDerek-ukufaka uxinzelelo kwasekuqaleni, ukuphosa iipunch kunye neebhombu.
Iindlela ezimbini ezahluke mpela, isimbo sikaJunior Fa sasikukuhamba nokuwola, ukubetha ngenqindi rhoqo. NgoDerek akukho mfihlo, uza kuza ngaphambili kwaye asebenzise uxinzelelo, aphose amanqindi kuyo yonke indawo. Izandla zam kuzakufuneka zibe phezulu, ezantsi kwaye zijikeleze.
“Ndikhe ndayintshatsheli yeHlabathi ngaphambili kwaye ndifuna ukuba yintshatsheli yeHlabathi kwakhona. Ukufezekisa loo njongo kuya kufuneka ndimkhuphe kuqala uDerek endleleni. Emva koko setha eminye imilo ekhoyo phaya. Senze konke esinako ukulungiselela nantoni na ayizisayo.
“Ndicinga ukuba lo ngumlo ogqibeleleyo ngexesha elifanelekileyo. Silapho, fumana uloyiso olufanelekileyo kwaye zininzi ezinye iimfazwe ezinkulu ezenziwayo apho kunye nokuzibeka ngokwakho xa izihloko zikhululekile ukuzilwela. Eli likhadi elikhulu, ayisiyomnyhadala kuphela kodwa iimfazwe ezingabalulekanga ziyonwabisa kakhulu, ndijonge uMgqibelo. ”
UChisora ​​ngokuchasene noParker ubeka phezulu ubusuku obukhulu bentshukumo eManchester, inkwenkwezi yaseIreland uKatie Taylor (17-0, 6 KOs) ukhusela isithsaba sakhe se-Lightweight esingathandabuzekiyo ngokuchasene nowayesakuba yimbangi yakhe u-Natasha Jonas (9-1-1, 7 KOs), ukukhanya okungafunekiyo kwe-WBA Light -Intshatsheli yeHlabathi yeWavyweight uDmitry Bivol (17-0, 11 KOs) ubeka isihloko sakhe kumgca ngokuchasene noCraig Richards (16-1-1, 9 KOs), uChris Eubank Jr (29-2, 22 KOs) ubuyela ngokuchasene noMarcus Morrison ( 23-3, 16 KOs), uJames Tennyson waseBelfast (28-3, 24 KOs) ujongene neJovanni Straffon yaseMexico (23-3-1, 16 KOs) kwi-IBO Lightweight World Title, Preston's Scott Fitzgerald (14-0, 9 KOs) ) wenza ukubuya kwakhe okulindelwe ixesha elide ngokuchasene noGregory Trenel (13-6-2, 3 KOs) kunye noLightweight ojonge uCampbell Hatton (1-0) umlo kwidolophu yakhe okokuqala njengepro ngokuchasene noLevi Dunn (0-4).
UChris Eubank Jnr: Injongo yokuGqibela kukufumana uGennady Golovkin
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UChris Eubank Jr., Eubank Jr vs.Morrison, UMarcus Morrison	0
Umfanekiso nguDave Thompson Umdlalo wamanqindi oMdlalo
UChris Eubank Jr noMarcus Morrison 1/5/21
Inkwenkwezi yeBrighton ijolise kwiitayitile zehlabathi emva konxibelelwano lukaJones Jr
UChris Eubank Jr. ujonge kwi-IBF ye-Middleweight yeQela leHlabathi uGynady Golovkin kwaye ukholelwa ukuba u-2021 ingangunyaka athi ekugqibeleni afike ekutshixeleni iimpondo ngenkwenkwezi enkulu ye-pound-for-pound evela e-Kazakhstan.
Umbane wamandla weBrighton ubuyela emfazweni e-UK okokuqala kwisithuba seminyaka emibini ngalo Mgqibelo umhla we-1 kaMay xa wayehlasela imbangi yaseBritane. UMarcus Morrison kwiAO Arena, eManchester, phila ngoku IOfisi yeBhokisi yeMidlalo yeSky e-UK kwaye DAZN Kuzo zonke iimarike ngaphandle kwe-UK, i-Ireland, i-China, i-New Zealand kunye ne-Samoa.
Emva kokuba ebekhankasela kwi-Super-Middleweight, u-Eubank Jr (29-2, 22 KOs) ubuyele kwicandelo le-Middleweight ukubanga isihloko se-WBA se-Middleweight World Title okwesibini ngokuphumelela kwe-TKO kulowo wayesakuba ngumceli-mngeni weTayitile yeHlabathi uMatvey Korobov ngoDisemba 2019, Ngelixa esenza amatyala akhe aseMelika kwiziko leBarclays eNew York.
U-Eubank Jr bekwiingxoxo zokulwa neGolovkin ngo-2016 kodwa eli thuba laya ku-Sheffield's Kell Brook. Iziphene kuphela kwirekhodi eyoyikekayo likaGolovkin kukuzoba kunye noloyiso kwimilo emibini noCanelo Alvarez, kodwa u-Eubank Jr uqinisekile ukuba angangowokuqala ukuba ayeke 'iGGG'.
"Ukudlula kuMarcus Morrison kundibekela imilo enkulu ehlotyeni nasebusika kulo nyaka," utshilo Eubank Jr. “Mininzi kakhulu imilo apho kwaye kukho amagama amakhulu kwicandelo le-Middleweight, uninzi lweeNtshatsheli zeHlabathi abalandeli abafuna ukundibona ndizokulwa nalo.
“Kukwakho nabalwi abangengabo iiNtshatsheli zeHlabathi ezinokwenzeka kum. UneKell Brook ethetha kakhulu kwaye ndiyazi ukuba uEddie Hearn ufuna ukuyilwa loo nto, yiyo loo nto inokwenzeka ehlotyeni.
“Injongo yokugqibela kukufumana uGolovkin. Ezinye iiNtshatsheli zeHlabathi kwisahlulo soBukhulu obuphakathi, uRyota Murata ngokuqinisekileyo ululuhlu lwam. Unesihloko seWBA seHlabathi esipheleleyo, ndiyintshatsheli yeThutyana yeHlabathi ngoku. Kukho amagama amakhulu phaya kunye nokulwa okukhulu.
“Kudala ndifuna ukulwa neGolovkin. Ndiyakholelwa ukuba ngulo nyaka ndizakumfumana. Ndiza kuzo zonke iibhanti. Yiloo nto ndikwezemidlalo ukuyenza. Ayikuko ukuba kufuneka ndikhangeleke kakuhle kulo mlo ukuze ndifike kweli nqanaba. Kuya kufuneka ujongeke kuwo wonke umlo, kwaye ndijongeka ulungile kuwo wonke umlo.
“Ngokwenene kwaye ngenene ndiyakholelwa ukuba ndizakumnqanda. Injini yam kunye nendlela yakhe yokulwa? Akabuyeli emva aye emfazweni nokuba wenza ntoni. Amandla angashukumiyo ngokuchasene nento engenakumiswa. Xa amajoni amabini angqubana ngubani owabeka konke emgceni, iya kuba ngumlo omangalisayo. Andikholelwa ukuba angandibetha okanye andiphumeze.
“Ukuphumelela okanye ukungaphumeleli ndibeke yonke emgceni. Kungenxa yoko le nto ndinabalandeli abaninzi. Andinamanxweme, andiyeki, kwaye andiyeki. Andilibali, ndikulo 100% yexesha. Obu bubomi bam, kwaye nje ukuba ndigqithe kuMarcus Morrison i-World Champions isengxakini enkulu. ”
Impixano kule mpelaveki kunye noMorrison izakuba ngumlo wokuqala ka-Eubank Jr ukusukela oko wadibana nomdlalo wamanqindi uRoy Jones Jr, owayekade eyimbangi katata wakhe, kwaye oneminyaka engama-31 ukholelwa ukuba uJones Jr uza kuba lulutho olongezelelekileyo kwiqela lakhe njengokuba Iithagethi zehlabathi
“U-COVID uzimosile izicwangciso ezininzi zomsebenzi wam ngo-2020. Ndemka ndachitha elo xesha ndalisebenzisa kangangoko ndandinako nokuqeqeshwa noRoy Jones Jr. Ukufunda kuye, kangangoko ndandinako, ukugqibezela ubugcisa. Ukufunda iimfundiso zikaRoy kunye nokuzama ukuzizalisekisa kangangoko ndinako ngokudibanisa noqeqesho. Ndiziva ngathi ndingumlo ongcono kuyo.
“Ndijonge kuRoy ukususela ebuntwaneni. Wayengomnye wabalwi endibathandayo. Ukukwazi ukuchitha ixesha elininzi kunye naye kwaye ndikhethe iingqondo zakhe ndize ndive yonke into ayithethayo kwezemidlalo kunye nendlela endimele ndenze ngayo kuye kwaba liphupha elizalisekileyo. ”
I-Eubank Jr vs.Morrison yinxalenye yobusuku obukhulu besenzo eManchester, UDerek Chisora (32-10, 23 KOs) kunye UJoseph Parker (I-28-2, i-21 KOs) zingqubana nengxabano enobunzima obukhulu, inkwenkwezi yaseIreland Katie Taylor (I-17-0, i-6 KOs) ikhusela isithsaba sayo se-Lightweight esingathandabuzekiyo ngokuchasene nembangi yangaphambili UNatasha Jonas (I-9-1-1, i-7 KOs), i-WBA Light-Heavyweight World Champion NguDmitry Bivol (17-0, 11 KOs) ubeka isihloko sakhe kumgca ngokuchasene UCraig Richards (16-1-1, 9 KOs), iBelfast UJames Tennyson (28-3, 24 KOs) ijongene neMexico UJovanni I-Straffon (I-23-3-1, i-16 KOs ye-IBO Lightweight World Title, Preston Super-Welterweight UScott fitzgerald (14-0, 9 KOs) wenza ukubuya kwakhe okulindelwe ixesha elide kunye nethemba lokukhanya UCampbell Hatton (1-0) umlo kwidolophu yakhe okokuqala njengepro.
ICota kunye neFundora Clash kwi-WBC Eliminatory Bout ngalo Mgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Fundora vs Cota, UJorge Cota, Sebastian Fundora	0
WaseMexico UJorge “Demonio” Cota Ndiza kulwa noMntla Merika Sebastián Fundora Kwelo khadi linye likhokelwa nguAndy Ruiz noChris Arreola ngoMgqibelo eDignity Health Sports Park eCarson, California.
UFundora uvela ngokunkqonkqoza uHabib Ahmed waseGhana kumjikelo wesibini ngoDisemba wonyaka ophelileyo. ICota ivela ngokunkqonkqoza uMntla Merika uThomas Lamanna kumjikelo wesihlanu ngoJanuwari 18 wonyaka ophelileyo.
UCota noFundora bazokungqubana kwi-super welterweight semi-final bout evunywe liBhunga lezeMidlalo yezeMidlalo yoMhlaba, ukusondela kwinqanaba lokulwa isithsaba sehlabathi nguJermell Charlo, ozakukhusela intshinga yakhe nxamnye noBryan Castaño waseArgentina ngoJulayi.
UTaylor-Jonas, uChisora-Parker weNkomfa yeendaba yeNkomfa yeeVidiyo, iiVidiyo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	I-Chisora ​​vs. Parker, UDerek Chisora, UJonas ngokuchasene noTaylor, UJoseph Parker, Katie Taylor, umdlalo wamanqindi, UNatasha Jonas, WBO	0
INGCACISO YENKOMFA KWABASEBENZI
Ii-WBO Bouts kwiAO Arena eManchester ngoMgqibelo, zihlala e-UK nase-Ireland kwi-Sky Sports Box Office, nakwihlabathi liphela kwi-DAZN.
UEddie Hearn, uSihlalo weMidlalo yeGumbi lokuDibanisa:
“Kumnandi kakhulu ukuba lapha eManchester phambi kobusuku obumnandi bomdlalo wamanqindi kulo Mgqibelo sisuka eAO Arena, sihlala kwiOfisi yeBhokisi yeSky Sports e-UK nakwiDAZN kwihlabathi liphela. Eli likhadi lonyaka ukuza kuthi ga ngoku. Kuninzi esinokuthetha ngako apha ukusukela kumnyhadala omkhulu weHeavyweight ukuya kwi-World Championship engathandabuzekiyo, ukuya kwi-World Light-Heavyweight Championship nokunye okuninzi. ”
UDerek Chisora ​​- Finchley, London - 32-10, 23 KO's - elwa noJoseph Parker ngesihloko esingenamntu seWBO Intercontinental Heavyweight Title:
“Ndiyakuthanda ukulwa, ukuziphosa kwiTayitile yeHlabathi kufanelekile. UDillian Whyte ebekwisihloko seHlabathi sokudutyulwa kule minyaka mihlanu idlulileyo, khange aye ndawo. Andizibeki kwezo zikhundla, ndifuna ukuzibeka kwindawo apho ndiza kulwa khona. Kulungile, ndilwa noJoseph Parker kwaye emva koko siza kubona ukuba kwenzeka ntoni.
“Ndifuna ukwenza eyona nto ndiyenzayo, ndize ngaphambili, ndilwe, nditshise isihogo kwaye ndenze le ndiyenzayo yonke imihla. Qengqa idayisi kunye neliwa kwaye uqengqe - yiya kuyo. Ndizophuma ngamasango ndihambe nje.
“Lomfo ulunywe sisigcawu, asinakukhanyela, asazi ukuba siyinyani okanye akunjalo, kodwa wayenaso kwaye ngoku ulapha - asizukukhala ngenxa yobisi oluchithekileyo. UDavid wenza into entle enxibe isuti yakwaSpiderman kwakusasa, kwakulungile. Umlo ulapha ngoku ke asizukuphinda sithethe ngembali, yiyo loo nto ibizwa ngokuba yimbali.
“Buzakuba bubusuku obumnandi; izinto ezintle ziyenzeka. Likhadi elikhulu, kodwa asinalo eli qela lincinci kunye nabalandeli, liyadandathekisa kodwa singathini.
“Inkosi ibuyile, phila inkosi-ndibuyile. Ndiyathetha, kubo bonke abalandeli ekhaya, ndiza kuzisa umsi kwaye ndiyazi ukuba umchasi wam uza kuzisa into eza kubakho kwibhayisikile yakhe - kodwa izakulunga. Uya kubuyela e-Australia ngebhayisikile kodwa konke kulungile. Ndiyazi ngoku ndisahleka kwaye ndiyaqhula kodwa xa ndiza ngomso, niyakukwazi ukuba ngubani ixesha. ”
UJoseph Parker -Auckland, New Zealand - 28-2, 21 KOs - ukulwa UDerek Chisora Isihloko esingenamntu seWBO Intercontinental Heavyweight Title:
“Ndiwulungele lo mlo, ndinenkampu enkulu yoqeqesho noAndy eIreland, emva koko safudukela eMorecambe kwaye safumana istrarring enkulu phantsi kwebhanti lethu, umsebenzi omkhulu wephedi, ibhegi, yonke into. Ndivakalelwa ngathi ndinalo mzabalazo, emzimbeni nasengqondweni, ndikwindawo entle- mhlawumbi yeyona ilungileyo bendikhe ndayihamba okwethutyana.
Katie Taylor -Bray, eIreland-17-0, 6 KOs-ukuyikhusela i-WBC, i-WBA, i-IBF, i-WBO kunye ne-Ring Magazine UNatasha Jonas:
“Kungenxa yoko le nto sithatha umlo; asithathi nakuphi na ukulwa okulula. Ndikulo mdlalo wokulwa eyona nto iphambili, ngokweenkampu zoqeqesho elowo nalowo uyafana, siqeqesha umlo ngamnye ngokungathi uzakuba ngowona unzima kum. Ingqondo yam iseti kunye nengqondo ayitshintshi umlo wokulwa ke ndijonge phambili kumlo omkhulu ngoMgqibelo.
“Umlo wawusenzeka kwiminyaka esithoba eyadlulayo, sobabini sasingoophuma silwe kulento sikuyo ngoku. Ndicinga ukuba sobabini siphuhlile kwaye sakhula saba ngabaphumi-mkhosi abakhulu. Idabi liza kwahluka ngokupheleleyo ngoMgqibelo ebusuku emva koko lalikwi-Olimpiki zaseLondon. Into esebenzayo kumdlalo wepro ayisebenzi kumdlalo we-amateur- lo ngumlo ohluke ngokupheleleyo.
“Ndicinga ukuba imidlalo yam yokugqibela ibonakalisile ukuba ndikwincopho yam, ndibonise konke okusemandleni am kwimidlalo embalwa edlulileyo. Umlo wam wokugqibela omathathu yayingowona midlalo mihle njengeprojeki, ke ndiziva ngathi ndiyaphucula kwaye ndisenza ngcono ixesha ngalinye. ”
URoss Enamait, umqeqeshi kaKatie Taylor:
“Silapha ukuphumelela umlo, siziqeqesha nzima kuwo wonke umlo. Lo ngumlo weshumi elinesibini kuKatie Taylor weLizwe; Eli lixesha leshumi elinambini lokulwa. Wonke umlo ngumlo omkhulu, siza kuphumelela kwaye silapha ukuze siphumelele ngoMgqibelo.
“Uzakuba bukhali njengakuqala, sijongeke kakuhle kumlo wokugqibela, simbethe ngokucacileyo uPersoon kumlo wesibini nokuba uthini [uJoe Gallagher] ngapha. Umlo phambi kokuba ujongeke kamnandi, akukho silayidi, uzobona uKatie ogqwesileyo ngoMgqibelo. ”
UNatasha Jonas -I-Liverpool, i-England-i-9-1-1, i-7 KO-icelomngeni Katie Taylor yeWBC yakhe, iWBA, IBF, iWBO kunye neMisesane yeMagazini yeLightweight Titles World:
Ngalo lonke ixesha ndicelwa ukuba ndinyuke, ndiyayenza, kwaye ndiyacula. Ukuba ngumntu ongaphantsi kwam akukho kwahlukile, ndihlala ndingaphantsi kobusuku obukhulu. Okukhona undixelela ukuba andinakuyenza, kokukhona ndiya kukubonisa ukuba ndiyakwazi.
“Kufuneka ukhumbule ukuba ukuya kumlo kaHarper sivele sivele ngaphandle, ngokwasezimalini bendingazi ukuba ndiza kuphinda ndibhokise nini, bendinosana olungu-24/7 kuba izikolo zivaliwe, kwaye Bendihleli nje kancinci kwindawo endiza kuya kuyo okanye apho ithuba lam liza kuvela khona.
Ngokucacileyo silifumene elo thuba, kwaye umntwana weza nazo zonke iiseshoni, ebeyinxalenye enkulu yenkampu. Kwakumnandi ukubuya, kwaye bendiqala ukwehla entabeni ngengqondo, ngokwasemzimbeni, ngokwasemphefumlweni. Ngoku andikho apho, emva komlo kaHarper, ndisencotsheni yentaba. Ndiqala kumlo kaHarper kunye nokwakha ukusuka kuloo nto. Yonke into ithi ndingcono kakhulu kunenkampu yaseHarper kwaye ndiyazi ukuba bekufanele ndibekhona.
“Ndicinga ukuba emanqindini inqindi enye itshintsha yonke into. Ndiyakholelwa ukuba ndinamandla; Andifuni ukuqikelela okanye ukungahloneli nabani na ngokutsho oko. Emva kwamava abuhlungu omjikelo wesi-8 ngokuchasene noHarper, ndazithembisa ukuba bafunda amagophe kwaye ayizukuphinda yenzeke. Ukuba ndifumana elo thuba, iyakuba sisiphelo somlo. ”
UJoe Gallagher, umqeqeshi kaNatasha Jonas:
“Kulungile ukubona ababhuki benika uNatasha ithuba elingcono ngokuchasene noKatie emva koko benza ngokuchasene noTerri Harper, kulungile ukuqala. Abahlobo bakhe baphinde badibana, uKatie Taylor-yintoni ongayithethiyo ngaye. Into ayiphumezileyo, ligorha lesizwe ebuyela eIreland, into ayenzileyo kumdlalo wamanqindi wabasetyhini kwihlabathi liphela, ngaphandle kwentlonipho kuye.
“Le yishishini lokulwa; yiza ngobusuku bangoMgqibelo le yishishini. UKatie Taylor, uyisithandwa seendaba, uNatasha Jonas uza kulwa emva kokusebenza kakuhle. Uphumelele itayitile yeWBC Super-Featherweight, ngabantu ababini kuphela kwihlabathi abangacingi ukuba uyifumene, kodwa ngaphandle koko uyiNtshatsheli yeHlabathi emehlweni am.
“UNatasha Jonas ngoku unyuka esiya kwiLightweight, ngoku uthatha into abantu abayichaza njengoyena mntu ulwela ixesha lonke wasetyhini. Lo ngumlo othi ukuba bekukho imizuzu emithathu yemijikelo yomdlalo wamanqindi wabasetyhini, iyakuba njalo. Ukuba ubuyela umva kwaye ubukele umlo wabo we-Olimpiki waseLondon ngo-2012, wawuyinto entle. Kodwa ukubonisa ukuba bobabini baphucule kangakanani ukusukela ngoko, kungangcono kwi-12 x 2 okanye 10 x 3 ukhuphiswano.
“Sine-sprint elishumi ejikelezayo apha; Sibona ukuba uNatasha ulwa unyaka noTeri Harper. Siya kulo mlo kunye nababhukisi ababambisene noNatasha ngakumbi, iijaji mazize zenze into ekufuneka ziyenzile, zingabi lapha ngenxa yokoyika uKatie okanye iMatchroom. Beza apha kwaye bafumane amanqaku okwenzekayo, iSky kuye kwafuneka ukuba baphawule ngeepunch ezibekiweyo, hayi apho bavela khona okanye into ejikelezayo.
“UNatasha ungumntu ophila phantsi komntu oqinileyo, ndiyakuxelela ngoku Katie Taylor, nokuba uyafuna ukuyithetha okanye akayifuni, le yeyona nkampu yoqeqesho inzima kwaye eqeqeshwe kakhulu kwezakhe zalwa. Uyasazi isoyikiso esibi esiziswa nguNatasha Jones. Bayasazi isoyikiso, into esiyifunayo kulo mlo bubulungisa babagwebi kunye nezimvo zokufumana amanqaku ngokubonwayo. Ukuba wonke umntu uyawenza umsebenzi wakhe, kubandakanya mna noNatasha, siza kuba neNtshatsheli yeHlabathi engathandabuzekiyo ezayo ngeCawa kusasa.
“Hlala phantsi, ukonwabele i-popcorn yakho kwaye wonwabele ukuba yintoni na - yeyona mfazi inkulu ilwa ne-UK ne-Ireland. Sinelungelo lokuba yinxalenye yayo kwaye siwubone lo msitho. Sizakuqengqa ngobusuku bangoMgqibelo. ”
INKOMFA YOKUPHELELA KWABASEBENZI:
IMIFANEKISO NGUMARK ROBINSON / MATCHROOM BOXING
I-WBC Cruiserweight Champ Makabu nguKumkani waseCongo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Ilunga Makabu, wbc	0
Intshatsheli yeWorld Boxing Council kwi-cruiserweight Ilunga Makabu (28-2, 25 knockout) ibonakalisile indlela yokoyisa ubunzima.
Wazikhusela ngempumelelo isihloko sakhe ngokuphumelela u-Olanrewaju Durodola kumjikelo wesixhenxe ngasekupheleni kukaDisemba kunyaka ophelileyo eKinshasa, kwiDemocratic Republic of the Congo.
Kodwa uMakabu wayenendlela enzima yokufumana iwonga leentshatsheli zehlabathi. Ngo-2016 wawa ngokuchasene neNgesi u-Tony Bellew, kunye ne-WBC Green kunye neGold Belt esemngciphekweni. Ngaphandle kokuthumela u-Bellew kwinqanawa kumjikelo wokuqala, uTony waziphindezela wamnqanda.
Nangona kunjalo, uMakabu akazange anikezele. Kwafuneka aqale phantsi kwakhona ukuze asebenze ngendlela yakhe ebuyela kwisihloko sehlabathi. Emva kokufumana uloyiso olukhulu, inkululeko yakhe yafika ngoJanuwari 31, 2020, xa woyisa uMichal Cieslak owayengazange abethwe ngaphambili kwi-WBC cruiserweight isihloko.
UMakabu ubonise ukuba nangona ekhubekile, woyisa yonke imiqobo ukuze oyise kwaye azalisekise iphupha lakhe.
Umphathiswa osandula ukumiselwa wezeMidlalo noKhuthazo waseKinshasa, kwiDemocratic Republic of the Congo, uSerge Nkonde, ebenentlanganiso nentshatsheli uMakabu kunye neqela lakhe, apho ukongeza ekuvuyiseni impumelelo abayenzileyo, wabanika inkxaso yokuqhuba ukukhusela okulandelayo kwesihloko sakhe kwesi sixeko sikhulu.
I-Bivol kunye ne-Richards bajongana ubuso ngobuso kwiNkomfa yeendaba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	IBivol vs.Richards, UCraig Richards, NguDmitry Bivol	0
UDmitry Bivol vs Craig Richards
NguDmitry Bivol kwaye UCraig Richards bajongane ubuso ngobuso okokugqibela phambi komlo wabo wangoMgqibelo we-World Boxing Association (WBA) ye-Light Heavyweight Super Championship, ephethwe yeyokuqala.
Umlo oza kubanjelwa e-Arena yaseManchester eNgilane uphawula ukubuyela kukaBivol kwindandatho. UBivol, intshatsheli yaseRussia, owazalelwa eKyrgyzstan, ngomnye wamajoni anomdla kakhulu kudidi.
Intshatsheli yathetha ngovuyo lwakhe lokuba abuyele eringini kunye nokuba uphose kangakanani ukukhusela isithsaba sakhe se-WBA, ngexesha lenkomfa yeendaba eyayimodareyithwe ngu-Eddie Hearn.
“Ndiyakukhumbula ukulwa. Andinakulinda ndibuyele eringini, ”utshilo uBivol, oza kwenza umlo wakhe wokuqala ukusukela ngo-2019.
Kwelakhe icala, uRichards uyazi ukuba akanawo umceli mngeni olula phambi kwakhe kodwa injongo yakhe kukuba yintshatsheli yehlabathi kwaye uceba ukwenza konke okusemandleni ukuphumeza le mpelaveki.
"Ndiyakholelwa ukuba ndizakuba yintshatsheli yehlabathi ngalo Mgqibelo," utshilo uRichards, othe wongeza ngelithi elona thuba lokuwina isihloko lelona lifanelekileyo ebomini bakhe kwaye uceba ukusebenzisa zonke izixhobo anazo ukuphuma nempumelelo.
NgolwesiHlanu bobabini kuya kufuneka benyathele ezikalini benze umda weepawundi ezili-175 kwisahlulo kwaye nje ukuba benze ubunzima, baya kuba bekulungele ukulwela isihloko. I-Bivol inerekhodi ye-17 iphumelele, akukho lahleko, kunye ne-11 KOs, ngelixa i-Richards inerekhodi ye-16 iphumelele, ilahleko e-1, ukuzoba enye, kunye ne-1 KOs.
UJoshua uxela kwangaphambili izinto ezinkulu ezivela kusapho lakwaFrankham
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UJoshua Frankham, ULevi Frankham	0
UJoshua Frankham sijonga ukuba sinokulindela ukuba kwenzeke ezinye iziqhushumbisi ULevi Frankham, ngoku ukuba umzala wakhe omncinci ejoyina iipro pro.
I-super welterweight Levi iza kungena kwindawo yeqonga ngolwesiHlanu ngokuhlwa kwikhadi elifanayo noJoshua - osebenza ezantsi ukuya kwi-welterweight- kunye nelinye elibalasele kumdlalo we-IBF we-flyweight isihloko phakathi kukaMoruti Mthalane noSunny Edwards.
UJoshua ubekwe bhetele kunokusinika ezantsi uLevi, esi sibini sikhule kunye kwii-amateurs kwaye ngoku besabelana ngokuzivocavoca eSouthampton phantsi komqeqeshi uWayne Batten njengeengcali.
Ngokuka-Joshua, 22, umzala wakhe oneminyaka engama-20 ubudala uyathanda ukusebenzisa iTheory ye-Big Bang xa efika emsebenzini.
"Uyakuba kumlo onomdla, onomdla- yonke imilo iya kuba yimincili kunye nokubethwa okukhulu," waxela kwangaphambili uFrankham osekwe kufundo. Uqinisekisiwe ukunkqonkqoza naye, uyibhakana enkulu kwaye unesisindo esikhulu.
“Ke ngoku kuya kubakho ubusuku obumangalisayo kuthi sobabini, kodwa ngakumbi uLevi.
“Uyayofuna ijugular kwaye xa eyibethile umdlalo uphelile. Uya kuba nomdla kubalandeli, abantu bayayithanda iknockout kwaye yile nto uyakuyifumana noLevi, ngokuqinisekileyo, ”yongeze i-2-0 pro, ngethemba lokuyinyathela ngoLwesihlanu, othi uLevi uqeshe icandelo lobuchwephesha okoko wajoyina indawo yokuzivocavoca. .
“Ufunda lukhulu kwaye sele ephuculwe kakhulu phantsi kukaWayne. Ngaphambi kokuba eze ngaphambili, uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo kwaye wayeza kubabetha phantsi, kodwa ngoku uluhlobo lokufunda ngokubhokisa kancinci kwaye ukhululekile kwaye uzolile.
“Ujongeke ngcono kwaye ndijonge umdlalo omninzi kuye.
Ewe kunjalo, kukho omnye uFrankham - uCharles - ngoku oshukumayo kwisangqa seQueensberry kwaye uJoshua utyhila ukuba abazala bakhe abathathu babengabantu abathathu aboyikekayo.
"UCharles yitalente ebalaseleyo, onokuhamba yonke indlela. Sonke sisondele, kodwa khange sihlangane kangangoko xa sonke sasibhokisana ndawonye njengabafundi.
“Besiliqela elixineneyo, ngakumbi ePinewood naseRing kwaye besileqa amanqindi engahambelani kwinqanaba elinye. Siza kujonga ukuyenza kwakhona kwizazi.
"UCharles wayehlala enguTata ngexesha leminyaka yesikolo kuba wayephumelela yonke into, kodwa ndaqala ukuzibamba kunye naye kwaye ndawina amanqaku, ke sonke senza ngokulinganayo ngokulungileyo.
Ingayithengisa into ukuba sonke besikwibhili enye. Uqinisekisiwe! IHolo yaseYork ngoSeptemba, ingabubusuku obungakanani obu. ”
Ngale mini: UKeith Holmes ugcinwe kwisihloko ngokuchasene noRobert McCracken
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	IHolmes vs. McCracken, UKeith Holmes, URobert McCracken	0
Keith Holmes vs URobert McCracken
Epreli 29th, 2000
I-American southpaw, uKeith Holmes, wagcina isihloko se-WBC middleweight, emisa iBritani uRobert McCracken kumjikelo weshumi elinanye, eWembley Arena eLondon. Usompempe, u-Alfred Asaro, umise isenzo isenzo kwimizuzu emibini kunye nemizuzwana engama-24 yaloo mjikelo. Abagwebi yayingu-Omar Mintun Ken Morita kunye noWalter Schall.
UTaylor noJonas baXele ukuba baLungele uMgqibelo
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	Katie Taylor, UNatasha Jonas, UTaylor noJonas	0
Njengokuba ulindelo lukhula kwaye kusondela uMgqibelo, iminyhadala yangaphambi kokuzikhusela kukaKatie Taylor ngokuchasene noNatasha Jonas ibanjelwe eManchester. NgoLwesine ibilithuba lenkomfa yokugqibela yoonondaba, nalapho iQela leMbethi-manqindi yeHlabathi (i-WBA) kunye nomlingisi wakhe banike umbono wabo malunga noko bakulindeleyo kumlo.
I-Irish izakukhusela ibhanti yakhe emnyama neyegolide, kunye neebhanti ze-WBO, WBC, kunye ne-IBF, kwinto eza kuba ngumlo olungileyo ngokuchasene nomchasi onjengoJonas, ozimisele ukonakalisa ubusuku beentshatsheli.
UTaylor uthe ukhuthazekile ukuba enze umboniso olungileyo kwaye ukulungele nawuphi na umceli mngeni: “Ndikulo mdlalo ndizokulwa nabona baphambili. Ndilindele umlo omkhulu ngalo Mgqibelo. ”
UJonas ubonakalise umdla wakhe kwaye wathi uhlala engaphantsi kwinto yonke yokulwa, kodwa ufuna ukumothusa uTaylor.
Yayingumnyhadala omkhulu wokuhamba kakuhle koonondaba kunye nokubakho kwabaqeqeshi bomlo ngamnye eqongeni ukuthetha ngamalungiselelo kunye neenkampu ababenazo.
Umnyhadala wokulinganiswa uzakuqhubeka ngolwesiHlanu, inyathelo lokugqibela phambi komlo, kwaye xa bewugqibile, bazakube bekulungele ukunikezela ngobunye ubusuku obumnandi bomdlalo wamanqindi kubalandeli behlabathi ngalo Mgqibelo.
IMTK Global Sign 'uBenwell Bomber' uJoe Laws
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBenwell Bomber, UJoe Laws, mtk jikelele	0
IMTK yeHlabathi Kuluvuyo ukubhengeza ukusayinwa kweBenwell Bomber eyaziwayo UJoe Laws.
Imithetho esoloko izonwabisa (9-1, 5 KOs) iye yaba ligama elikhulu kumdlalo wamanqindi wase-Bhritane kule minyaka imbalwa idlulileyo, ukunceda ukuthengisa ii-arenas kuwo wonke uMntla Mpuma ngenxa yesiseko sakhe sabalandeli.
Oko kuye kwabonakala kwiminyhadala ye-MTK Fight Night eNewcastle, apho iMithetho ithathe uloyiso oluninzi lokumisa, kulonwabo olukhulu kubalandeli ababekho.
U-26-oneminyaka ubudala ngoku uza kujonga ukubuyela kwiindlela zokuphumelela kulandela umlo wakhe no-Rylan Charlton ngo-Okthobha, kwaye uziva ukuba ukudibana ne-MTK Global yeyona ndlela ilungileyo yokufezekisa oko.
Imithetho yathi: “Ndithetha ngokuzibandakanya noMTK Global. Ndibe nobunye ubusuku obubalaseleyo ebomini bam xa ndikhuphisana kwimidlalo ye-MTK Global, kwaye oku kundinike ukuphakama endikudingayo. Ndiyakholelwa ngokwenyani ukuba i-MTK Global izakundisa phezulu.
“Icebo kukupakisha iNewcastle ngalo lonke ixesha kukho umboniso apha phezulu. Ndifuna ukuba indawo igcwaliswe emanqatheni, kwaye ndiza kubeka ebusuku abantu abangalibaliyo. Ndiyonwabisa kwaye ndikulungele ukulwa.
“Ndonwabile ngomsebenzi wam ukuza kuthi ga ngoku. Umlo wam wokugqibela awuzange ucwangciswe kwaye ngendenze izinto ngokwahlukileyo, kodwa andizisoli kwanto. Ndineminyaka engama-26 ngoko ndisemncinci kwezemidlalo, kwaye ndinexesha lokukhula, ukukhula kunye nokuqalisa kwakhona ibhola.
“Kwiinyanga ezili-12 ezizayo ndifuna ukuphinda ndisebenze kwakhona. Ndifuna ukubuyisela igama lam phaya ngaphandle kwaye ndikhankasele umlo ophakamileyo kwakhona. Lo nyaka uzayo uza kuba yimincili kwaye iBenwell Bomber kunye neMTK Global ziya kuhamba yonke indlela. Ndiyeza!"
Umnyuseli we-MTK Global Lee Lee Eaton wongeze: “Siyavuya ukwamkela uJoe Laws kwiqela. Sisebenze ngokusondeleyo noJoe kangangeminyaka eliqela xa wayekhuphisana kwiminyhadala yethu yasebusuku yeMTK Fight, kwaye ngoku ukuba naye ngokusemthethweni njengomlwi we-MTK Global kumnandi.
Sizibonele ngokwethu indlela athandwa ngayo eMantla Mpuma, kwaye asinakulinda ukuba sibuyele khona kungekudala kwaye simfumane nenxalenye yeziganeko ezinkulu.
"Ibingazukuba yeyakhe kumlo wakhe wokugqibela nxamnye noRylan Charlton, kodwa siyamazi uJoe ukuba angakwazi ukubuyisa umva kwaye abe yinxalenye enkulu yomdlalo wamanqindi waseBritane kwiminyaka ezayo."
Iindaba zokuba iMithetho iyakuba nini nomlo wakhe wokuqala njenge-MTK Global fighter eyakubhengezwa ethubeni.